Nitondra fandriampahalemana izy - Church of God World Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Nitondra fiadanana izy
"Ary satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5: 1
Ao amin'ny sary nataon'ny vondrona mpanao hatsikana Monty Python, vondrona jiosy mafana fo (mafana fo) mipetraka ao amin'ny efitrano maizina misaintsaina ny fanonganana an'i Roma. Hoy ny mpikatroka iray: “Nalain'izy ireo ny fanananay rehetra, tsy avy taminay ihany, fa tamin'ny razanay sy razambenay koa. Ary inona no nomeny antsika ho valiny? " Ny valintenin'ny sasany dia: «» Ny lakandrano, ny fidiovana, ny arabe, ny fanafody, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny divay, ny fandroana ampahibemaso, amin'ny alina dia afaka mandeha an-tongotra soa aman-tsara eny an-dalambe ianao, fantatr'izy ireo ny fitandroana ny filaminana. "
Somary sosotra noho ny valiny ilay mpikatroka, hoy izy: "Tsy maninona ... ankoatry ny fanadiovana tsara kokoa sy ny fitsaboana tsara kokoa ary ny fanabeazana sy ny fanondrahana ary ny fahasalamam-bahoaka ... inona no nataon'ny Romana ho antsika?" Ny hany valiny dia: "nitondra fiadanana ianao!"
Io fitantarana io dia nahatonga ahy hisaintsaina ilay fanontaniana napetraky ny olona sasany hoe: “Inona no nataon’i Jesoa Kristy ho antsika?” Ahoana no hamalianao an’io fanontaniana io? Tsy isalasalana fa afaka nitanisa ny zavatra maro nataon’i Jesosy ho antsika isika, toy ny nahafahana nitanisa ny zavatra maro nataon’ny Romanina. Ny valiny fototra, na izany aza, dia hitovy amin'ilay nomena tamin'ny faran'ny sketch - nitondra fiadanana izany. Izao no nambaran’ireo anjely tamin’ny nahaterahany: “Voninahitra ho an’Andriamanitra any amin’ny avo, ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany!” Lioka 2,14
Mora ny mamaky an’io andininy io ary mieritreritra hoe: “Tsy maintsy mivazivazy ianao! Fiadanana? Tsy nisy fiadanana teto an-tany hatramin’ny nahaterahan’i Jesosy.” Tsy ny fiafaran’ny ady mitam-piadiana na ny fampitsaharana ny ady anefa no resahina, fa ny fihavanana amin’Andriamanitra, izay tian’i Jesosy hatolotra antsika amin’ny alalan’ny sorona nataony. Ao amin’ny Baiboly no voalaza ao amin’ny taratasy ho an’ny Kolosiana 1,21-22 “Ary ianareo izay nivahiny fahiny sady fahavalo araka ny fitondran-tena tamin’ny asa ratsy, dia efa nampihavaniny ankehitriny tao amin’ny tenan’ny nofony tamin’ny fahafatesana, mba hanolotra anareo ho masina sady tsy misy tsiny ary tsy misy tsiny.”
Ny vaovao tsara dia tamin'ny alàlan'ny nahaterahany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny niakarany tany an-danitra dia efa nanao izay rehetra ilaintsika i Jesosy mba hihavanana amin'Andriamanitra. Ny hany tokony ataontsika dia ny manolotra azy ary manaiky ny tolotra omeny amin'ny finoana. "Noho izany dia afaka mifaly amin'ny fifandraisantsika vaovao mahafinaritra amin'Andriamanitra isika satria nahazo fihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5:11
Ray ô, misaotra anao fa tsy fahavalonao intsony izahay, fa nampifanao anay taminao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy Tompo ary sakaizanay izao. Ampio izahay hankasitraka ny sorona izay nitondra fiadanana ho anay. amena